Waxyaabaha caanka ah ee caanka ah, Microencapsulation, Ka-hortagga Difaaca - Finutra
Finutra waxay u heellan tahay inay noqoto soo-saare isku-dhafan oo loogu talagalay silsiladda caalamiga ah, waxaan ku siineynaa noocyo badan oo ceyriin ah iyo maaddooyin shaqeynaya sida soo saaraha, qeybiyaha iyo alaab-qeybiyaha Beverage, Nutraceutical, Food, Feed and Cosmeceutical Industry. Tayada, hirgelinta iyo raad raadinku waa tiirarka taageera saldhigga qaab-dhismeedkeenna iyo yoolalka aan higsaneyno. Laga soo bilaabo qorshaha illaa fulinta, xakamaynta, xiritaanka iyo jawaab celinta, howlahayaga waxaa si cad loogu qeexay heerarka warshadaha sare.
Alaabadayada Noo Soo Baxay
5-HTP 99% Peak X Bilaash Bilaash ah
Rootka Root Soo saar Curcumin Powder
Hawlaha wax soosaarku waa kuwo si adag u waafaqsan heerarka GMP. Shaybaarka tijaabada dhexe waxaa lagu qalabeeyaa nuugista atomiga, wejiga gaaska iyo wajiga dareeraha. Dhibcaha kontoroolka muhiimka ah waxaa lagu tijaabiyey dhibco go'an oo si aan kala sooc lahayn loo tijaabiyay, sidaa darteed si loo hubiyo in qayb kasta oo ka mid ah alaabtu ay ka sarreyso rajada macaamiisha. Wax soosaarka iyo hawlgalka, Finuta had iyo jeer waxay raacdaa mabaadii'da "hagaajinta deegaanka dabiiciga ah iyo caafimaadka dadka", waxay si adag u xakameysaa tayada, waxayna ku dadaaleysaa inay siiso alaab iyo adeegyo kafiican iibiyeyaasha caalamka.
Tribulus terrestris (qoyska Zygophyllaceae) waa geedo sannadle ah oo gurguurta oo ku baahsan Shiinaha, bariga Aasiya, wuxuuna ku fidaa galbeedka Aasiya iyo koonfurta Yurub. Midhaha dhirtaan waxaa loo adeegsaday Daawada Dhaqanka Shiinaha si loogu daaweeyo dhibaatada indhaha, barar, calool xanuun, dhiig kar, iyo cudurada wadnaha halka Hindiya isticmaalkeeda Ayurveda loogu talagalay ujeedada awood darrida, cunto xumo, cagaarshow, xanuunada urogenital, iyo cudurada wadnaha. Tr ...
Valeriana officinalis waa warshad, badanaa loo yaqaan valerian. Dhaqan ahaan, xididdada valerian-ka waxaa loo kariyaa shaah ama waxaa loo cunaa ujeedooyin nasasho iyo dejin. Valerian waxaa loo maleynayaa inuu xoojinayo calaamadaha mid ka mid ah neurotransmitters-ka ugu weyn ee dajiya, gamma-aminobutyric acid (GABA). Adeegsiga asaasiga ah ee Valerian ayaa ah inuu dejiyo walaaca ama u sahlanaato inuu seexdo. Magaca Badeecada: Valerian Extract Source: Valerian Officinalis L. Qaybta la Isticmaalay: Xididdada Soosaaray dareeraha: Biyaha & ...
L-Theanine waa amino acid kaas oo laga helo noocyo kala duwan oo dhir ah iyo noocyo boqosha ah, wuxuuna si gaar ah ugu badan yahay shaaha cagaaran. L-Theanine waxaa caadi ahaan loogu yeeraa si fudud Theanine, oo aan lagu qaldin D-Theanine. L-Theanine wuxuu leeyahay macaan gaar ah, muuqaalka dhadhanka umami waxaana badanaa loo isticmaalaa in lagu yareeyo qadhaadhka cuntada qaarkood. Faa'iidooyinka L-Theanine L-Theanine waxay lahaan kartaa saameyn xasillooni leh oo niyadda iyo hurdada ah waxayna taageeri kartaa shaqada maskaxda waxayna caawineysaa feejignaanta, diiradda, garashada, iyo xusuusta ...
Diosmin waa kiimiko ku jirta dhirta qaarkood. Waxaa badanaa laga helaa miraha liinta. Waxaa loo isticmaalaa daaweynta cudurada kala duwan ee xididdada dhiigga oo ay ka mid yihiin babaasiirta, xididdada xididdada dhiigga, wareegga lugaha oo xumaada (venous stasis), iyo dhiig-baxa (dhiig-baxa) isha ama ciridka. Badanaa waxaa lagu qaadaa hesperidin. Magaca Badeecada: Diosmin Source: Citrus Aurantium L. Qaybta la Isticmaalay: Midhaha aan bislaan Soosaarida Soosaarayaasha: Ethanol & Water Non GMO, BSE / TSE Free Non Irridiation, Allergen F ...
Asal ahaan: Centella asiatica L. Wadarta Triterpenes 40% 70% 80% 95% Asiaticoside 10% -90% / Asiatic Acid 95% Madecassoside 80% 90% 95% / Madecassic Acid 95% Hordhac: Centella Asiatica, oo badanaa loo yaqaan Asiatic pennywort ama Gotu kola, waa dhir doog badan, dhaxan-jilicsan oo soo noqnoqda oo u dhalatay dhulka qoyan ee Aasiya. Waxaa loo isticmaalaa sida khudradda cuntada iyo sida geedo daawo ah. Centella asiatica waxaa badanaa loo yaqaanaa kaabis kor u qaadista garashada oo leh faa iidooyin dheeri ah caafimaadka wadnaha (in ...
Huperzine-A waa iskudhis laga soo saaray dhirta qoyska Huperziceae. Waxaa loo yaqaan 'acetylcholinesterase inhibitor', taas oo macnaheedu yahay inay joojiso enzyme-ka inay jabiso acetylcholine taas oo keenta kordhinta acetylcholine. Huperzine-A waxay umuuqataa inay tahay mid kaamil ah daraasadaha xoolaha ee sunta iyo daraasadaha bina aadamka oo aan muujineynin wax saameyn ah oo dhanka qiyaasta ah oo si joogto ah loogu kabo. Huperzine-A waxay ku jirtaa tijaabooyin hordhac ah oo loogu talagalay isticmaalka la dagaallanka Cudurka Alzheimers sidoo kale, a ...
Phosphatidylserine Sooray Soosaarida budada 50% N ...
Phosphatidylserine, ama PS, waa dhismo la mid ah dufanka cuntada oo aad ugu baahsan unugyada neerfaha aadanaha. Waa la soosaari karaa sidoo kalena lagu cuni karaa iyada oo loo marayo cuntada, laakiin faa'iidooyin dheeraad ah ayaa lagu heli karaa iyada oo la adeegsanayo kaabis. Waxay taageeri kartaa shaqada maskaxda waxayna kor u qaadeysaa niyadda caafimaadka leh iyo caawinta garashada, xusuusta, iyo diiradda Waxay sidoo kale kaa caawin kartaa adkeysiga isboortiga iyo soo kabashada jimicsiga. -Waxay taageertaa shaqada maskaxda; -Wuxuu dhiirrigeliyaa niyadda caafimaadka leh; -Iska garashada; -Xasuusta caawinta; -U shaqeynta caawinta diiradda; -...
CoQ10 waa isku-darka fiitamiin-u-eg ee jirka lagu soo saaro si loogu shaqeeyo mitochondria, sidoo kale waa qayb ka mid ah cuntada. Waxay caawisaa mitochondria inta lagu jiro wax soo saarka tamarta waana qayb ka mid ah nidaamka antioxidant endogenous. Waxay la mid tahay xeryahooda kale ee loo yaqaan 'pseudovitamin' maxaa yeelay waa u muhiim badbaadada, laakiin qasab maahan in loo qaato kaabis ahaan. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira suurtagalnimo yaraansho sababtoo ah wadno xanuun wadnaha, qaadashada statins, cuduro kala duwan, ...